ဥဇဘက်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(433 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... လောင်းကစားဝိုင်းမဆိုကြင်နာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဥဇဘက်အတွက်တားမြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲက Phasing ရေကန်ပိတ်ပင်ထားသောအခါ 2002 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သဘာဝကျကျ, ဘိလိယက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းသည်မဟုတ်, ဒီဥပမာဿုံဥဇဘက်၏ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ဖွဲ့လုံးကလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ဘယ်လိုအလေးအနက်ထားပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အာဏာရပါတီ အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဦးဇျဘလူတွေ၏ဝိညာဉ်ကိုက်ညီတဲ့နှင့်ရာဇဝတ်မှုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအစွမ်းထက်မက်လုံးပေးကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါကပြောသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် 2003-2004 အတွက်ဥပဒေအကြီးအကျယ်သင်ပိုက်ဆံအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ရှိရာအလုပ်အဆောက်အဦ, ဆင်းပြုတ်သောကျန်ရှိသောလောင်းကစားဝိုင်း, ထိန်းညှိရန်လွန်ခံခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ 2007 အတွက်ဥဇဘက်၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကဤမကြာသေးမီဂိမ်းအခန်းပေါင်းတားမြစ်ထားတဲ့အထူးအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်ဥဇဘက်အတွက်ဥပဒေရေးရာလောင်းကစားဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများအဆုံးသတ်ထား၏။
လောင်းကစားဝိုင်းဥဇဘက်များတွင်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒေသခံများဂိမ်းကိုခံစားရန်အဘို့အတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိလောင်းကစားအဘို့ရှေးခယျြစရာတွေ့ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏လှုပ်ရှားမှုများလည်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် Uzbek နိုင်ငံခြားလောင်းကစားဝိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရှာတှေ့ရှိမကစားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် option ကိုယခင်ရုရှားနိုင်ငံနီးပါးအပေါငျးတို့သသမ္မတနိုင်ငံအတွက်တည်ရှိသောအွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာ၏ဥပဒေရေးရာ status ကိုမသေချာမရေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကလပ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များတစ်အရေအတွက်ချိတ်ဆက်အင်တာနက် access ကိုနှင့်အတူဧည့်သည်ကွန်ပျူတာများ, ကိုဆက်ကပ်။ ဟုတ်ပါတယ်, လှုပ်ရှားမှု၏ဤအမျိုးအစားတရားမဝင်သည်နှင့်, ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့ဥပဒအွန်လိုင်းလောင်းကစားဖို့အာဏာပိုင်များကတရားစွဲသည်ဤကလပ်နှင့်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များညီပါဘူး။ ၎င်းတို့၏အရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေနှင့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌သူတို့ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းများ၏သမိုင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောစာမျက်နှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည်။
ထိပ်တန်း 10 များစာရင်း ဥဇဘက် အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ
ဥဇဘက်ထံမှကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်ဥဇဘက်ထံမှကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
ဥဇဘက် - အာရှအလယ်ပိုင်းမှရှေးဟောင်းအရှေ့တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ဘဏ္ဍာကို။ တုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့အရသာ, 1000 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုသည့်နာမည်ကျော်အဘိဓါန် Uzbek- pilaf စာရွက်, Samarkand, Bukhara နှင့် Khiva ၏ခရီးသွားဧည့်ပုလဲ - အားလုံးနိုင်ငံခြားသားများအတွက်အလွန်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာ။ သို့သော်မည်သို့သောအရာတို့ကိုလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူလိုက်ကြသလဲ ဤမေးခွန်းကိုဤဆောင်းပါး၌ပင်ထူး CasinoTopLists ။
ကာစီနို (အွန်လိုင်းနှင့်မြေယာ-based) ဥဇဘက်အတွက်တားမြစ်ထား;
ဥဇဘက်နှင့် Uzbek အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်များ။
သမိုင်းနောက်ခံ - လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ဥဇဘက်ရဲ့ဥပဒေများ
အစ္စလာမ်ဘာသာ၏တရားဝင်ဘာသာဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ချမှတ်ထားတိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားမှသဘောထားများအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ Imprint ။ အစ္စလာမ်ဘာသာမှာတော့လောင်းကစားဝိုင်းလက်မခံနိုင်ယူဆနေသည်။
2002 ဘိလိယက်အပေါ်ပိတ်ပင်ထားမှု။ ယခုအချိန်တွင်ယင်းပိတ်ပင်ထားမှုကိုရုပ်သိမ်း။
2003 အမိနျ့တျော "ထီ၏အဖှဲ့အစညျး၏လိုင်စင်တွင်။ " 314 №သုံးဆယ်ငါးကြိမ်နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ၏ပမာဏအတွက်လိုင်စင်ပြည်နယ်တာဝန်များ၏ထုတ်ပေးရေးသည်။
2007 "လောင်းကစားဝိုင်း၏အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့အကငျြ့နဲ့ဆက်စပ်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများတိုက်ဖျက်ဖို့အစီအမံများတွင်" ဥဇဘက် # PP-608 ဆုံးဖြတ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ
ရရှိနိုင်ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိနိုင်ငံခြားအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှ Access ကိုကတရားမဝင်နှင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်အပြစ်ပေးသည်။
တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ပျော်စရာထီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများမျိုးပေါင်းအပေါင်းတို့, အစိုးရပိုင်ရှိပါတယ်။ အနောက်တိုင်းစတိုင်ဘင်ဂိုကစားခေါ်ဆိုခဖြစ်သောရုရှား lotto ၏တရားဝင်ဂိမ်းအဖြစ်။
တရားဝင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံပိတ်ပင်ခဲ့။ တိုင်းပြည်သေးထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးမရှိသေးပေအဖြစ်ဒါပေမယ့်သာအနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အရင်းအမြစ်များကိုပိတ်ဆို့ပြီ။ ကျန်ရှိနေသေးသောရာပေါင်းများစွာနှင့် ပို. ပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ဆိုဒ်များ။ ဘုံအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များ၏ပိုက်ဆံအိတ်အနိုင်ရတဲ့၏ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်အတူပြဿနာများလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်။
ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, အွန်လိုင်း format နဲ့ကစားသမားကစားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဒါပါဘူး။
Prohibitory အရေးယူနှမြော, နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီတော့ 2012 အတွက်ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမညျဖွစျကွောငျး "ကွန်ပျူတာဂိမ်းအကယ်ဒမီ" ၏တည်ထောင်ခြင်းကြေငြာခဲ့သည် "လူမှုရေးအရနှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအရေးကြီးသောကွန်ပျူတာဂိမ်း။ " အစောပိုင်းကမီဒီယာများနိုင်ငံအတွင်းအမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သော Skype ကို, WhatsApp ကို«အေးဂျင့်အဖြစ်မသန်စွမ်းအများအပြားလူကြိုက်များလက်ငင်းတမန်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် Mail.Ru »နှင့်ကြေးနန်း။
ကြက်နှင့်ခွေးတိုက်ပွဲတွေ - ထီအပြင်, ဂိမ်း၏ထိုအချိန်ကအခြားအင်အားလည်းမရှိ။ သူတို့ဟာ polulegalnymch ဖြစ်ကြသည်။
တဖကျတှငျ - ဒီလောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီပျော်စရာတားမြစ်ထားကြောင်းဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောဥပဒရှိသေး၏။ ရလဒ်အဖြစ် Uzbek မဆိုနေရာဒေသထဲမှာတွေနဲ့ခွင့်ပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင်တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအလောင်းအစားသူတို့ကိုလုပ်ဘယ်မှာအနည်းငယ်သောနေရာများမှာအနည်းဆုံးရှိပါတယ်။
ဥဇဘက်သမ္မတနိုင်ငံ - ကာဂျစ္စတန်, အာဖဂန်, ကာဇက်စတန်, Tajikistan နှင့်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်မှကပ်လျက်ဖြစ်သောအာရှအလယ်ပိုင်းတစ်တိုင်းပြည်။ အကြောင်း 30 လူဦးရေသန်းပြည်နယ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကား - ဦးဇျဘ, ဒါပေမယ့်အများကြီးရုရှားကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ကြသည်။
Uzbek - ကနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလအာရှတှငျနထေိုငျသူ Turkic လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု၏အမြစ်, ဥဇဘက်ဟာ VIII-VII မှာရာစုနှစ်များစွာခေတ်သစ်၏ပိုင်နက် Khorezm နှင့် Bactria ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါဘီစီအတွက်ခံရမည်စတင်ခဲ့သည်။ Bactrian မင်းသမီး Roxana ပင်မဟာအလက်ဇန္ဒား၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့သည်။
Tashkent, Karshi, Samarkand, Khiva, Bukhara, Karshi, Termez, Margilan: ဥဇဘက်အများအပြားရှေးဟောင်းမြို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
VI ကို-VII မှာရာစုနှစ်များစွာခုနှစ်တွင်ဥဇဘက်၏နယ်မြေဟာ Turkic Khanate နှင့် Sassanid အင်ပါယာကအုပ်ချုပ်, သူတို့နောက်ခဲ့ - အာရပ်အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့။ ဒါဟာနောက်ပိုင်းတွင် Samanid ပြည်နယ်ဖန်တီးခဲ့ပေမယ့်က Khorezm ၏ပြည်နယ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ - Genghis Khan က။
အဆိုပါ XIV ရာစုတှငျပါဝါ Tamerlane ၏လက်၌ရှိ၏။ ယခုပင်လျှင်အဆိုပါ XV ရာစုတစ်ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်စိုးမိုးရေး Ashtarkhanids အောက်တွင်ကျဆင်းသွား, နှင့် XVIII ရာစုတှငျပထမဦးဆုံးအဘိဓါန် Uzbek- ပြည်နယ် Sheibanids ဖွဲ့စည်းခဲ့ - Mangits ။ ထိုအခါ Kokand ၏ Khanate ၏ခေတ်ရုရှားအင်ပါယာအားဖြင့် XIX ရာစုအတွင်းကျိုးပဲ့ရှိ၏။
နှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်ပိုင်နက်ဦးဇျဘဆိုဗီယက်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ဆိုဗီယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် 1991 အတွက်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ဒီနေ့အစ္စလာမ်ဘာသာကာရီမော့ဗ်ကဦးဆောင်နေတဲ့သမ္မတသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ် - Shavkat Mirziyayev ။
Chorsu ဇား ။ နေရပ်လိပ်စာ: pl ။ Eski Juva, Tashkent ။ ဤသည်အများအပြားရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သည့်အာရှအလယ်ပိုင်းအတွက်အသက်အကြီးဆုံးစျေးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုမပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခင်ကပင်ကြီးမြတ်သောမင်းတို့ကိုယျတိုငျစျေးသွားရောက်အထင်အမြင်သေးခဲ့ပါဘူး။
မိပြီမာမ်ရင်ပြင်မှာ ။ နေရပ်လိပ်စာ: pl ။ မိပြီမာမ်, Tashkent ။ ဒါဟာမြို့တော်၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Tilla ရှိတ်ဗလီ, ဗလီ XVI ရာစုဗာရ Khan ကအစ္စလာမ့်အင်စတီကျု: ဒါဟာဥဇဘက်အတွက်အဓိကဘာသာရေးကွန်းအာရုံစိုက်ကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီမာမ် Bukhari, ဂူဗိမာန်ဆက်သွယ်ရေး။ အဘူ Bakr Kaffal Shashi ။
Dzhuma ဗလီ ။ နေရပ်လိပ်စာ: pl ။ Chorsu, Tashkent ။ သို့သျောလညျးကဂျူမာဗလီ 'ဟုဆိုအပ်၏။ အဆိုပါအဆောက်အဦးမြို့အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုမှာတစ်နှစ် 819 ၌ထားရှိပါသည်။ ဒါဟာမြို့တော်သားအပေါငျးကျန်ရစ်သူဗလီ၏ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Tashkent တီဗီမျှော်စင် ။ နေရပ်လိပ်စာ: st ။ Amir Temur, 109, Tashkent ။ အာရှအလယ်ပိုင်း, 375 မီတာအမြင့်ကအမြင့်ဆုံးကို non-စက်မှုအဆောက်အဦ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုတမြို့လုံးအတွက်မှမြင်နိုင်သည့် Tashkent ၏သင်္ကေတ, တစျခု။
ဘုရားသခင်၏မိခင်များ၏ Assumption ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ။ နေရပ်လိပ်စာ: st ။ Avlioota, Tashkent ။ အဆိုပါ 1950s ၏ဤပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး, 1871 built-in ဟာဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ အဆိုပါ 1990s မှာဧရိယာချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ခွငျးဖွငျ့ခြီးမွှောခဲ့သည်။
ဥဇဘက်နှင့် Uzbek အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Uzbek သငျသညျရုရှားနှင့်အဘိဓါန် Uzbek- ဘာသာစကားများလမ်းပေါ်မှာဆိုင်းဘုတ်များအပေါ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်, လက်တင်အက္ခရာဖို့ Cyrillic ကနေပြောင်းရွှေ့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အက်ခရာပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ဥဇဘက်တောင်အာဖရိက, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံအပြီးရွှေသိုက်၏အသံအတိုးအကျယ်အားဖြင့် 4th သိရသည်။
ဥဇဘက်အိန္ဒိယ, အမေရိကန်, တရုတ်နှင့်ပါကစ္စတန်နှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာဝါဂွမ်း၏5အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများ, တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samarkand - ဥဇဘက်မှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးမြို့, သူ့အသက်အရွယ်ရောမမြို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်, အဲဒီအကြောင်း 2750 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဥဇဘက်များတွင်သာဗဟိုအာရှ, မြေအောက်ရထားထဲမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1977 ၌ထားခဲ့ပါတယ်။
Tashkent - ကမ်ဘာပျေါတှငျအနညျးဆုံးညစ်ညမ်းမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဒါကြောင့်ညဉ့်ကောင်းကင်ပြာရှင်းပါတယ်နှင့်သင်ဿုံကြယ်မြင်နိုင်ပါသည်။
0.2 ထိပ်တန်း 10 ဥဇဘက်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.0.1 သမိုင်းနောက်ခံ - လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်ဥဇဘက်ရဲ့ဥပဒေများ
3.1.1 အနာဂတျမှာ ng?
3.3 Tashkent ဆွဲဆောင်မှု
3.4 ဥဇဘက်နှင့် Uzbek အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရပ်မှန်များ
လောင်းကစားရုံလောင်းကစားရုံအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေ codes တွေကို 2020 rush